Japon - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 2)
Mandritra ny lohataona dia lava kokoa ny andro, mahafinaritra kokoa ny mari-pana ary afaka mankafy ny natiora amin'ny zavatra rehetra isika ...
Zavatra tokony ho fantatrao raha mankany Japon ianao
Izahay ato amin'ity lahatsoratra ity dia mitondra zavatra 10 tokony ho fantatrao raha handeha ho any Japon ianao atsy ho atsy: manomboka amin'ny fombafomba fitondran-tena ka hatrany amin'ny ba kiraro be dia be.
Ny telo andro any Osaka, torolàlana momba ny fomba hahatongavana any sy izay hitsidihana
Osaka tsy mankaleo. Izy io dia manana trano mimanda, lakandrano, fivarotana ary fiainana amin'ny alina tsy manam-paharoa!
Torolàlana Hiroshima, ny telo andro tao amin'ny tanànan'ny baomba ataoma
I Hiroshima dia tanànan'ny baomba ataomika ary raha manana telo andro ianao dia tsy azonao hadinoina izany. Tsy hay hadinoina!
Toro lalana fitaterana Japon, fitaterana, sakafo, vidiny, fiantsenana
Tian'i Japon ve ianao nefa mihevitra fa lafo be? Tsia, azo idirana izy ary miandry anao, koa soraty ireo toro-hevitra sy fampahalalana ireo mba hankafizanao!
Tempolin'i Toshogu: Ny fitoerana masin'ireo rajako hendry 3
Tsidiho ny Tempolin'i Toshogu any Japon, fantatra amin'ny anarana hoe Sanctuary an'ny rajako hendry 3 izay mandray mpitsidika an-tapitrisany isan-taona. Inona no mampiavaka azy?
Fanandramana dimy any Japon izay tsy tokony halainao
Raha mandeha mitsangatsangana any Japon ianao dia mamporisika anao hiaina ireo traikefa dimy tsy hay hadinoina ireo
Ny ala famonoan-tena any Japon
Ny ala famonoan-tena dia toerana eo amin'ny tehezan-tendrombohitra Fuji, any Japon. Toerana feno zava-miafina izay mamono tena ny olona.
Tokyo, tanànan'ny sarivongana goavambe
Jereo ny sarivongana lehibe indrindra sy malaza indrindra ao Tokyo
Tokyo - Kyoto amin'ny Nozomi Super Express Shinkansen
Lazainay aminao ny toetran'ny dia Tokyo - Kyoto ao anaty fiaran-dalamby japoney na Shinkansen, ilay anarana iantsoana azy ao.
Torohevitra hitsidihana ny tanànan'ny Japoney ao Hiroshima
Hiroshima, tanànan'ny baomba ataoma
Hiroshima Memorial Park, fahatsiarovana ny baomba ataoma
Ny Fasan'i Jesosy izay any Japon
Any Japon dia misy tanàna iray milaza fa manana ny fasan'i Jesosy
Nosy Miyako, Karaiba Japon
Ny morontsirak'ireo Nosy Mitako, torapasika any Japon, ao Okinawa
Seagaia Ocean Dome, morontsiraka namboarin'olombelona lehibe indrindra any Japon
Fironana io: mahazo vahana erak'izao tontolo izao ny torapasika noforonin'olombelona. Efa afaka mandro amin'izy ireo isika amin'ny toerana tsy mitovy amin'i Monaco, Hong Kong, Paris, Berlin, Rotterdam na Toronto. fa tsy misy mahatalanjona sy lehibe toy ilay any Seagaia Ocean Dome, ao amin'ny tanànan'i Miyazaki, Japon. Ny lehibe indrindra eto an-tany.
Ny tendrombohitra Fuji, fantatra ihany koa amin'ny hoe Fujisan na Fujiyama, dia mahatratra 3.376 metatra ny haavony, izy io no tampony avo indrindra eran'i Japon
Aokigahara, toerana mety maty
Aokigahara dia ala matevina sy maizina miorina eo am-pototry ny Tendrombohitra Fuji izay manana laza mahatsiravina. Any Japon dia fantatra amin'ny anarana hoe "toerana mety maty izy" noho ny mpivarotra faran'izay tsara Wataru Tsurumui: "Manual famonoan-tena feno". Tsy isalasalana fa iray amin'ireo toerana mangatsiaka indrindra eto amin'ny firenena ary manintona mpitsidika liana tsy vitsy izany.
Ny omby Kobe: ny omby misotro labiera
Ny hen'omby Kobe dia iray amin'ireo sakafo tadiavina indrindra eto Japon. Ny kalitao miavaka amin'ny nofony dia azo avy amin'ny fomba fahanterana tena manokana. Ireto misy ny tsiambaratelo: ny labiera dia fahanana labiera mandritra ny fahavaratra, izay miteraka filana mihoapampana ao aminy.